Kubonwa ngokusa kunogada odutshuliwe - Ilanga News
Home Izindaba Kubonwa ngokusa kunogada odutshuliwe
Kubonwa ngokusa kunogada odutshuliwe
Izigebengu bezifuna izinjini ebezisiza abafundi
KUBONWA ngokusa ko-munye wonogada ababi-li abadutshulwe ezinta-thakusa ngoMgqibelo eFolweni High School, eningi-zimu yeTheku, ngesikhathi kugasela izigebengu ebeziyo-kweba izinjini no-gearbox bamaQuantum, okunikelelwe lesi sikole ngabakwaToyota.
Silobe izolo kubikwa ukuthi okwenza kwembulwe kwembe-swe kulo nogada, wukuthi inhlamvu ingene esifubeni.
Ngokuthola kweLANGA, lezi zinswelaboya zigasela kulesi sikole nje, besisanda kunikele-lwa ngezinjini ezintathu zamaQuantum no-gearbox ukulekelela abafundi abenza izifundo zeMechanical Technology. Kusolakala ukuthi lezi zigilamkhuba zizwile ngalokhu zabe sezigasela esikoleni zeba lezi zinjini.
Kuthiwa uMnu Mkhize noMnu Nene – okube wumqa-nsa ukuthola amagama abo – bebesemsebenzini ngesikhathi betholana phezulu nezigebe-ngu ebesezivele zinga-phakathi esikoleni.
Kubikwa ukuthi uMnu Nene udubuleke ethangeni, uMnu Mkhi-ze wadubuleka esifu-beni. Lezi zigebengu kuthiwa zithathe izinjini ezintathu nezinye izimpahla zesikole, zashaya zachitha.
UNgqongqoshe we-zeMfundo KwaZulu-Natal, uMnu Kwazi Mshengu, uzwakalise ukukhathazeka ngezi-gameko ezinodlame ezenzeka ezikoleni.
Ukhale ngokuthi lesi sigameko senzeke endaweni eyodwa na-lapho kwadutshulwa khona uthisha waseMasuku Primary, uMnu Sibonakaliso Nyawose.
“Sikhathazekile ngezigameko zodlame ezikoleni zethu. IFolwe-ni kubukeka kuyindawo okumele siyibhekisise. Sifisa sengathi bangelulama ngokushesha ono-gada, ikakhulukazi lona olaliswe egunjini labagula kakhulu,” kusho yena.
Uthe lesi sigameko sikuvezile ukuthi ukuba khona konogada ezikoleni akusona isixazululo, ngakho njengomphakathi kumele kusetshenziswane ukuze kuzotholakala izixazululo.
Okhulumela amaphoyisa, uCol Thembeka Mbhele, uthe kuvu-lwe icala lokubamba inkunzi nawokuzama ukubulala kanti bekungakaboshwa muntu.
Previous articleBasonga ukudunga umcimbi kaNcwane
Next articleAyisicabangi isithembu intokazi yeLockdown